Famba wakadzikama zhizha rino nemotokari neiyi dashcam / yekumashure yekutarisa girazi | Gadget Nhau
Miguel Hernandez | 04/07/2021 16:10 | Yakagadziridzwa ku 04/07/2021 16:16 | General, Reviews
Izvo zvave kuwedzera kuve zvakajairika kupfeka a dashcam mumotokari dzedu. Kunyange zviremera muSpain zvisati zvasarudza kutonga nyaya iyi, kune dzimwe nyika dzakaita seRussia kana United States ivo vagara vari chigadzirwa chinodikanwa kwazvo nevatyairi. Mune ino kesi isu tinoda kukuratidza imwe yeanonyanya kunakidzwa madashcams atakave nemukana wekuyedza kusvika zvino.
Tsvaga nesu Wolfbox G840H-1 yekumashure yekutarisa girazi ine dashcam uye yekumashure kamera, yekumashure yekutarisa girazi ine skrini uye akawanda maficha ekupa. Gara nesu uye isu tichakuratidza iwe kuti chii chakasarudzika chigadzirwa chakabata pfungwa yedu chine.
Sezvinowanzoitika nguva dzose, kuActualidad Gadget isu tafunga kuperekedza iyi yakadzama ongororo nevhidhiyo yakanaka, saka usarasikirwa nemukana weku Nyorera kuchiteshi chedu YouTube Uye zvechokwadi tisiyei mhinduro pavhidhiyo kana muine mibvunzo, tichapindura senguva dzose, nekukurumidza sezvazvinogona. Saka iwe unogona kutibatsira kuti tirambe tichiunza iwe idzi dzinonakidza ongororo.
3 Kuiswa uye GPS kanyanga
4 Dashcam kurekodha uye yekupaka system
Iyi Wolfbox G840H yekumashure yekutarisa girazi inozivikanwa, chimwe chinhu chakakura kupfuura avhareji chemirazi chatinoona zuva rega rega, uye icho ndechekuti ine 12-inch screen. Iyo yekumashure-yekutarisa girazi inogara 34 x 1 x 7 masendimita, saka ichave iri hombe kupfuura yako yakasanganiswa yekumashure-yekutarisa girazi. Iyo ine mutengo unonakidza kwazvo paAmazon, zviongorore.
Mukati medu isu takaiisa pane yekumashure yekutarisa girazi rePeugeot 407 uye rinoifukidza zvizere. Yakagadzirwa nesemi-inofungidzira girazi, inozotibvumidza kuona iyo skrini patinenge tichida, kana kuishandisa seyakajairwa girazi. Pamupendero wepamusoro isu tichawana zvinongedzo zvatichataura nezvazvo gare gare, pane yepazasi imwe chete yepakati pa / bhatani bhatani rechidzitiro uye chishandiso chakazara, uye kumashure iyo huru kamera ichaita sedashcam, ine system ichatibvumidza isu kugadzirisa iyo yekurekodha nzira.
Iyi sisitimu inokwidza mbiri-musimboti ARMCortex A7 processor ine simba re900 MHz, inopfuura kukwana kwekuita kweiyo Wolfbox yekumashure girazi rinoitisa mabasa ayo pasina lag uye rinotendeuka nekukurumidza zvakanyanya kana tangotanga kutyaira. Isu hatina, chokwadika, ruzivo maererano nekugona kwe RAM iyo mudziyo unokwira. Kune iro chikamu, isu tine microSD kadhi kuverenga, izvi zvinosanganisirwa nekwanisi ye32 GB uye yekumashure-yekutarisa girazi ichave inoona nezvekuchengetedza nekubvisa zvirimo zvinoenderana neyakapihwa gadziriso.
Mberi kamera: 5MP Sony IMX415 ine 2,5K resolution
Rear kamera: 2MP FHD Kugadziriswa
Tine yekunze GPS kanyanga inowanikwa mupakeji, pamwe nekamera yekumashure ine resolution ye1080P ine zvitsigiso zvakasiyana siyana zvichienderana nezvinodiwa. Iyo skrini, iyo yakanyatso bata, ine FHD resolution inodarika kukwana kwekuita kwemabasa ezuva nezuva. Kune chikamu chayo isu tine G-Sensor izvo zvichaita marekodhi kana chikaona tsaona, pamwe ne kupaka kuongorora Kana isu tikachinjisa kune chisingaperi simba sosi inobvumira iyo, zvinoenderana nemhando yekuisa yatinoita panguva iyoyo.
Kuiswa uye GPS kanyanga
Kuisirwa kunozove kuri nyore kupfuura zvataigona kufungidzira. Kana iri yegirazi rekuona rekumashure, isu tinongo gadzirisa nemamwe ma washer erabha akaiswa mubhokisi kune yedu yekuona girazi uye ichagadziriswa zvakakwana. Zvino bata waya, tinotanga ne miniUSB, iyo yandinokurudzira kuenda nharaunda yekurudyi yemota, Isu tinongounza tambo kubva kumusoro, yakavanzwa kuseri kwemusoro wemusoro, sezvakakodzera (ini ndinokurudzira kutarisa vhidhiyo kana kuverenga rairo papakeji) kune imwe yemagetsi magetsi.
Isu tava kuwana GPS kanyanga, Iyo yakabatana kuburikidza neimwe chiteshi nekuda kweichi chinangwa. Iyo kanyanga ine 3M tepi, saka ini ndinokurudzira kuinamira pagirazi remhepo kuti uwane mhinduro dzakanakisa.
Pakupedzisira kamera yekumashure, tambo yemamita matanhatu inosanganisirwa inozokwana kazhinji. Tiri kuisa tambo kuburikidza neiyo upholstery kusvika tasvika kumashure. Isu tinopfuudza tambo kuburikidza nepaburi rerambi reti rezinesi uye tinonamatira kamera yekumashure munzvimbo yepakati yebhamba pane ndiro rezinesi pachayo isina kuifukidza. Zvino tamba batanidza tambo tsvuku kune imwechete waya inopa simba kune iyo "reverse" mwenje, nenzira iyi kamera inomutsa mitsara yekupaka. Mumaawa asingasviki maviri iwe unofanirwa kunge wapedza kumisikidza kwakazara. Nenhanho idzi isu tichava nekupedzisira sisitimu yakaiswa.
Dashcam kurekodha uye yekupaka system
Iyo dashcam ichaita loop kurekodha zvinoenderana nezvatinogadzirisa, tinogona kugadzirisa zvikamu zviri pakati pe1 ne5 maminetsi. Tine tekinoroji yeWDR inodzivirira kupokana nemwenje yehusiku kuitira kuchengetedza yakajeka kurekodha. Nokuva G-Sensor, kurekodha kuchachengetwa nekuvharwa kana ichinge yaona kufamba kamwe kamwe, zvakafanana zvinogona kuitwa kana tikaita "kaviri tap" pachiratidziri.
Kana isu takabatanidza iyo tsvuku waya kune yazvino yekudzoreredza mwenje, patinosuma iyo "R" ivo vanozoonekwa iyo mitsara yekubatsira kupaka mune yekumashure yekutarisa girazi, iyo yatinofanira kutanga tayanisa nemaoko (nekubata iyo skrini) saka kuti inotipa yakavimbika mhedzisiro. Panguva dzese isu tinokwanisa kusarudza kuti tione yekumashure kana yekumberi kamera pachiratidziri, zvakare pindirana nekupenya kwaro nekutsvedza kuruboshwe rwegirazi.
Kana iri GPS, Kana isu takaiisa nenzira kwayo, inotipa makonati enzvimbo yatiri kugadzira kurekodha uyezve ichatiratidza iyo chaiyo kumhanya munguva chaiyo muchikamu chezasi chekuruboshwe chegirazi rekuona kumashure. Iyi sisitimu yaita mushe mumiyedzo yedu. Kurekodha kwehusiku kwavewo kunonakidza, pasina matambudziko mune izvi.
Mumiyedzo yedu, kamera yaita nemazvo. Iyo ine maikorofoni yemukati saka tichakwanisa kugadzirisa kuti tide here kana kuti kwete kuti ruzha runyorwe, nenzira imwecheteyo muzvirongwa tichakwanisa kusarudza Spanish semutauro. Kana isu takaita kuiswa zvakanaka zvakakwana, chokwadi ndechekuti isu tinowana mhedzisiro inoshamisa uye ini ndaona iri inonakidza kwazvo system yekuchengetedza pamutengo wakanakisa watinogona kuisa kuti tifambe zhizha rino. Mutengo waro paAmazon ndi169 euros, kunyangwe ichiwanzove nemitero yakawanda yemazana gumi nemashanu euros.
Inosanganisira zvese zvekumisikidza
Inoshanda mushe uye nekukurumidza
Kumwe kupenya kwekunze
Pamwe yakanyanya kukura kumakomputa mota
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Famba wakadzikama zhizha rino nemotokari neiyi dashcam / yekumashure yekutarisa girazi
Mhoro. Ndiri kufarira iyo wolfbox G840H yekumashure yekutarisa girazi. Ndinoda kushandisa kamera yekumashure kuona vana vangu muzvigaro zvekumashure. Iwe unofunga kuti ndinogona kuve ndakakosha here? Ndinotaura izvi nekuiswa kwekamera uye nekubhenekera kamera (tarisa kumusoro kumusoro). Ndatenda